Adeegga duulimaadka aan joogsiga lahayn ee Zurich-Montego Bay ayaa ah ciyaar-beddele
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Adeegga duulimaadka aan joogsiga lahayn ee Zurich-Montego Bay ayaa ah ciyaar-beddele
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Nathania Hall, oo ay weheliso hooyadeed Sanchia Gordon-Hall ayaa markii ugu horreysay safka hore kaga jiray duulimaadkii aan joogsiga lahayn ee ka imanayay Zurich kuna socday Montego Bay habeenimadii Isniinta, Julaay 5, waxay heshay salaanta u hoggaansamaysa COVID-19 ee Wasiirka Dalxiiska, Mudane Edmund Bartlett. Hoolalka waa Jamaicaanka degan Austria.
Habeenimadii xalay (July 5) duulimaad toos ah oo udhaxeeya magaalada maaliyadeed ee Switzerland, Zurich iyo Montego Bay, ayaa calaamad u ah soo bandhigida hanaan duulimaad oo muhiim ah kaas oo lagu amaanay inuu yahay wax-ka-beddelka cayaaraha dalxiiska soo kabashada ee Jamaica.
Wasiirka dalxiiska Bartlett ayaa sheegay in duulimaadka bilowga ah ee u dhexeeya Zurich iyo Montego Bay ay sare u qaadi doonto isku xirnaanta qaybta Yurub.
Baahida loo qabo Jamaica way badan tahay oo waddammada shaqsiyeed waxay leeyihiin awood ay ku kaxeeyaan lambarrada.
Jamaica looma arko oo kaliya inay tahay xarun fasax u ah fasalka dhaqaalaha laakiin sidoo kale loogu talagalay cidhibta wanaagsan iyo qiimaha saafiga ah ee saafiga ah.
Wasiirka Dalxiiska, Mudane. Edmund Bartlett, ayaa ku dhawaaqay adeegan inuu yahay "wax badal ciyaarta marka la eego kor u qaadista isku xirnaanta qaybtaas Yurub," ka dib markii uu soo dhoweeyay Kabtan Patrick Ritter iyo shaqaalaha diyaaradda Edelweiss Airline, oo keentay 99 rakaab ah bilowgeedii. Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadeeda, “hada waxaan aragnay in baahida loo qabo Jamaica ay aad isugu urursan tahay isla markaana wadamada shaqsiyaadka ah ay leeyihiin awood ay ku kaxeeyaan nambarro ku filan in diyaarad aan joogsi laheyn la keeno Montego Bay.”
Munaasabaddan ayaa lagu xusay, iyadoo wasiir Bartlett uu hadiyado guddoonsiiyay Capt. Ritter oo cusboonaysiinaysa aqoontiisii ​​Montego Bay. Xusuusta joogitaankeygii halkan 15 sano ka hor iyo waqti fiican, soo laabashadiisuna waa "farxad weyn."
Zurich waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu qanisan Yurub Mr. Bartlett wuxuu u arkaa xiisaha imaatinkiisa Jamaica sida "bayaan weyn oo ah in Jamaica kaliya loo arkin inay tahay xarun fasax u ah fasalka dhaqaalaha laakiin sidoo kale loo arko cidhibta wanaagsan iyo tirakoobka saafiga ah ee qiimaha badan." Tani wuxuu yiri waa muhiim maadaama ay abuureyso kalsooni dheeraad ah oo dib loogu dhisayo heer sare "si kheyraadka ku harsan Jamaica ay nooga caawiyaan dhismaha dhaqaalaha loo xaqiijiyo."
Soo dhaweynta adeegga, Agaasimaha Dalxiiska, Donovan White wuxuu sheegay in Guddiga Dalxiiska ee Jamaica (JTB) ay si joogto ah uga shaqeynayeen soo jiidashada dadka soo booqda, in kasta oo COVID-19 uu faafa yahay. Waxaan aad ugu dadaalnaa dalabka aan abuurnay, wax dadaal ahna ugama harin suuqa si aan u xaqiijino in Jamaica loo taagay sidii mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee laga heli karo socdaalka kuwaasoo diyaar u ah inay safraan, ”ayuu muujiyay.
Mr. White wuxuu yiri ka dib bilowgii cudurka safka ah sanadkii hore, “Jamaica iyo Gudiga Dalxiiska waxay abuureen faallooyin ka badan meeshii aan u soconay weligeyna kuma abuurin waqti kale oo taariikhdeena ah waana u sameynay si ula kac ah maxaa yeelay waxaan u baahanahay inaan hubino in sidii Waxaan ka tallaabsaneynaa aafada oo aan ka soo baxnay, in aan awood u lahayn in aan Jamaica u soo bandhigno qaab sii wadi doona in lagu sii wado baahidaas.
Edelweiss waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay shirkada duulimaadyada tamashlaha ee Switzerland, duulimaadyada ka imanaya Zurich ilaa 70 meelood meel.
Dhanka kale, garoonka diyaaradaha caalamiga ee Sangster ayaa markale waxaa kajira mashquul aad u badan iyadoo lagu soo kordhiyay dhowr duulimaad oo cusub Jamaica.
Madaxa Fulinta ee MBJ Airports Ltd., Shane Munroe ayaa sheegay in soo kabashada dalxiiska ay socoto iyadoo howlgalada garoonka diyaaradaha ay ka dhaqaaqeen 30 boqolkiiba bishii Janaayo ilaa 70 boqolkiiba dhamaadka Juun, marka la barbardhigo 2019 iyo “xagaaga rajada ayaa u muuqata mid wanaagsan inta badan Mareykanka. ” Wuxuu intaas ku daray in qaar ka mid ah 80 boqolkiiba shaqaalaha garoonka ay dib ugu soo laabteen shaqada.
Wuxuu sheegay in bisha lixaad ay tahay bil xoogan oo in ka badan 200,000 oo rakaab ah ay soo caga dhiganayaan garoonka diyaaradaha tiro intaa ka badana lafilayo bilaha July iyo Ogosto, oo ah bilaha xagaaga ugu sareeya, “iyo rajada xilliga qaboobaha waa mid wanaagsan. Haatan ma hayno duulimaadkii Yurub ee iman lahaa marka markaad duulimaadyada ku darto TUI, duulimaadyada ka yimaada Kanada ee aayar aayar ugu soo noqonaya, Ingiriiska sidoo kale, hubaal soo kabashada ayaa si wanaagsan u socota. ”